အသက်(၁၁)လပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Ah Boyနဲ့မြတ်ရတနာကျော်တို့သမီးချောလေး Scarlett ရဲ့မွေးနေ့Video လေး - Myanmarload
အသက်(၁၁)လပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Ah Boyနဲ့မြတ်ရတနာကျော်တို့သမီးချောလေး Scarlett ရဲ့မွေးနေ့Video လေး
လွန်ခဲ့သော ၄ လ က 08:09 August 14, 2019
ပရိသတ်တွေအားလုံးက အားကျနေရတဲ့အတွဲလေးကတော့ Ah Boy နဲ့ မြတ်ရတနာကျော်တို့ဇနီးမောင်နှံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်ရတနာကျော်ဟာ အဆိုတော်လွှမ်းပိုင်သီဆိုထားတဲ့ " တစ်ခါကတက္ကသိုလ် " ဆိုတဲ့ MTV မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရာမှတစ်ဆင့် အနုပညာလောကထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အနုပညာလောကမှအနားယူကာ သမီးလေးကိုအချိန်ပြည့်ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Scarlett လေးဟာလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပိုချစ်ဖို့ကောင်းလာတာပဲ ဖြစ်ပြီး ဖိုးဖိုး၊ဖွားဖွားတို့ရဲ့အသည်းကျော်လေး ဖြစ်နေတာပါ။ သမီးလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ဝေမျှလေ့ရှိပြီး အားလုံးကချစ်မဝဖြစ်နေကြတာပါ။ မနေ့ကတော့ သမီးလေး Scarlett လေးရဲ့ (၁၁) လပြည့်တဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သမီးလေးရဲ့မွေးနေ့လေးကိုတော့ ဖေဖေနဲ့မေမေတို့က မွေးနေ့ကိတ်လေးခွဲကာ ကျင်းပခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေမေမြတ်ရတနာကျော်ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်လည်း " Happy 11 Months Birthday Scarlett
Thank you Ma Ma Ju Juu & Ma Ma Phaung Phaung for these lovely birthday presents.
Thank you so much for being good elder sisters of mine. Love two of you so much!
#11monthsoldbaby " ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေးရဲ့မွေးနေ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးလည်း ကြည့်ရှုနိုင်အောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source- Myat Yadanar Kyaw
Page generated in 0.0975 seconds with5database query and6memcached query.